मंगल ग्रहमा भेटियो गिलो माटो, चिनियाँ रोभरले फेला पार्यो पानीको प्रमाण
काठमाडौँ । लाखौं वर्ष पहिले मंगल ग्रहमा पानी रहेको वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । सतहमा सुख्खा ताल पनि भेटिएको छ, जसले 'मंगल ग्रहमा जीवन' को आशाका धेरै ढोका खोलेको छ ।
चीनको जुरोङ रोभरले यो खोजमा ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । रोभरले मंगल ग्रहमा पहिले अनुमान गरिएको भन्दा लामो समयको लागि पानी भएको प्रमाण फेला पारेको छ । जुरोङ रोभर २०२१ को मे १५ मा मंगल ग्रहको उत्तरी गोलार्धमा 'युटोपिया प्लानिटिया' भनेर चिनिने मैदानमा अवतरण गरेको थियो ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको भाइकिंग २ ल्यान्डर पनि सन् १९७६ मा यही ठाउँमा अवतरण भएको थियो । चिनियाँ रोभरको प्रारम्भिक मिशन रातो ग्रहमा पुरातन जीवनको प्रमाण फेला पार्नु थियो । यसले खनिज, वायुमण्डल र मैदानमा फैलिएको पानी र बरफको विशाल क्षेत्रको जाँच गर्‍यो । रोभरले आफ्नो अवतरण साइट जाँच गर्‍यो र ग्रहको परिक्रमा गर्ने टियानवेन-१ अर्बिटरमा जानकारी फिर्ता पठायो । रोभरको प्रारम्भिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले वैज्ञानिकहरूलाई चकित पारेको छ ।
मंगल ग्रहको ‘खराब समय’ ३ अर्ब वर्षअघि सुरु भएको थियो ।
रोभरको तथ्याङ्कले यूटोपिया प्लानिटियामा पानी रहेको बताउँछ जब धेरै वैज्ञानिकहरूले मंगल ग्रह सुख्खा र चिसो थियो भन्ने सोचेका थिए । यी आविष्कारहरू साइन्स एडभान्सेज पत्रिकाको अध्ययनमा प्रकाशित भएका छन् । अर्बौं वर्ष पहिले मंगल ग्रह तातो र पानीले भरिपूर्ण ग्रह थियो तर समय बित्दै जाँदा यो बाँझो, बरफ मरुभूमिमा परिणत भयो । मंगल ग्रहमा परिस्थिति परिवर्तन हुन थालेको समयलाई करिब ३ अर्ब वर्षअघि सुरु भएको ‘अमेजनियन इपोक’ भनिन्छ र अहिले पनि जारी छ।
अन्वेषकहरूले बेसिनमा पाइने खनिजहरूको बारेमा जुरोङ डेटाको विश्लेषण गरेका छन् । रोभरका धेरै उपकरणहरूको विश्लेषण पनि अध्ययन गरेका छन् । तिनीहरूले रातो ग्रहमा अन्यत्र पाइने हाइड्रेटेड खनिजहरू जस्तै हाइड्रेटेड सिलिका र सल्फेटहरू पनि फेला पारेका छन् । 'सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र नयाँ कुरा यो हो कि हामीले अवतरण साइटमा हाइड्रेटेड खनिजहरू भेट्टायौं ।' अध्ययनका प्रमुख लेखक याङले भनेक छन् । यी हाइड्रेटेड खनिजहरू भूमिगत पानी जस्तै जलीय गतिविधिहरूको सूचक हुन् ।
मंगल ग्रहको सतहमा रहस्यमय कालो-निलो धुवाँ !
काठमाडौँ । मंगल ग्रहले हामीलाई सधैं मोहित गरेको छ । यद्यपि हामीले यो ग्रहमा जीवन फेला पारेका छैनौं, तर मानव मात्र यो ग्रहमा गएर जीवन सुरु गर्न चाहन्छ । यसैबीच,
समाजको परिवर्तनका लागि विज्ञान प्रविधिको भूमिका महत्वपूर्ण- प्रधानमन्त्री देउवा
ललितपुर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा आयोजना गरिने विज्ञान तथा प्रविधि सम्मेलनले राष्ट्र विकासमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् । उनले मुलुकमा विज्ञान र प्रविधिको विकास र विस्तारसम्बन्धी यस्ता गतिविधिले
बृहस्पति ग्रह ठूलो भएको वैज्ञानिकहरुको दाबी
काठमाडौँ । चन्द्रमा,सूर्य र हाम्रो सौर्यमन्डल कसरी बन्यो भन्ने अध्ययन गर्न धेरै अन्तरिक्ष अभियानहरू भएका छन् । तर, विशाल ग्रह बृहस्पतिको उत्पत्तिको रहस्यबारे चित्तबुझ्दो जबाफ अझै फेला पर्न सकेको छैन्
विवाहित महिलाले गुगलमा बढी के सर्च गर्छन् ?
काठमाडौँ । गुगलले हरेक वर्ष एक रिपोर्ट साझा गर्दछ । यसमा उनले मानिसहरूले सबैभन्दा बढी के खोज्छन् भनी बताउछ । साथै, यो धेरै भागमा विभाजित छ । यसमा, धेरै खोजिएको